Ugwu Jeans. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ogige | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Akwụkwọ ndị ntorobịa
Foto: Blue Jeans. Ibe Facebook.
Acha anụnụ anụnụ, pseudonym nke onye edemede Sevillian Francisco de Paula Fernandez, nwere akwukwo ohuru ohuru nke oma, nke oma na nke ugbua trawontọ ogologo tumadi na akwukwo umuaka. Aha ya Ogige ahụ ma ọ bụ a thriller nke ọ na-anwa anwa imetụ ihe omimi gbara gburugburu ọnwụ na ọnọdụ dị iche iche mere na ogige nke ndị na-eto eto sitere na mmalite dị iche iche bịara. Na nke a Ajụjụ ọnụ na-agwa anyị banyere ya na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere m ekele maka oge na obiọma gị.
Blue Jeans - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Ogige ahụ ọ bụ akwụkwọ ọhụụ gị, ebe ị siri pụọ isiokwu nke akwụkwọ ndị gara aga. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche a siri bido?
BJ: Echeghị m na m nwetara nke ahụ. Ihe na-eme bụ na ugbu a, a raara akụkụ bụ isi nye ihe omimi, mana ọ ka nwere otu stampụ Blue Jeans dị ka mgbe niile. Ọ bụ ihe ụtọ na-eto eto nke sitere na mkparịta ụka dị n'etiti mụ na onye mụ na ya nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọ dabara ya na ya nwere ike ikewapụ ụfọdụ ụmụ nwoke n'ogige a na-enweghị ekwentị na enweghị njikọ andntanetị ma site ebe ahụ m kere akụkọ ahụ.
BJ: N’eziokwu anaghị m echeta. Dịka nwatakịrị, a gụrụ m ọtụtụ n'ihi na ndị mụrụ m na-agụ akwụkwọ nke ukwuu, m na akwụkwọ niile gbara gburugburu. Ikekwe akụkọ mbu edere m bụ akụkọ dị mkpirikpi nke mmadụ na-anwụ na arụmọrụ ụlọ ihe nkiri, na njedebe a chọpụtara na onye gburu ọchụ bụ m (ma ọ bụ ihe yiri ya). Agbanyeghi na ihe mbu m na-echeta bu edemede banyere ochi na ha zitere m na klaasi.
B.J.: Agatha Christie bụ naanị ntụpọ m. Agụọla m ihe niile gbasara ya. Enweghị m ọtụtụ ndị edemede ederede: Carlos Ruiz Zafon, Tolkien, Julio Verne… M na-agụkwa ihe niile gbasara ya Dolores Gburugburu o John onyekwere, dịka ọmụmaatụ.
BJ: Ikekwe Poirot ma ọ bụ Sherlock Holmes. Enwere m mmasị na mkpụrụedemede nwere ọgụgụ isi na nke mbepụ.
BJ: M na-edebu n’ụlọ ahịa kọfị ruo mgbe ọrịa ahụ dara. Enweghị m ike ịgbachi nkịtị dee na, ọzọ, ọbụnadị mkpọtụ ọbụla ka agụ. Ọ bụ ezie na enweghị m nnukwu ntụrụndụ maka otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ.
BJ: Akwụkwọ akụkọ m niile, ewezuga Ogige ahụ, Edere m ha pụọ n'ụlọ. Na-amasị m dee na mkpọtụ, na-ekiri ka ndị mmadụ na-abịa ma na-ala. Enweghị m ike ịkọwa ihe kpatara ya, n'ihi na amaghị m onwe m. Coffeelọ kọfị ahụ ghọrọ ọfịs m. Ka ewere lear Achọrọ m ịbụ n'ụlọ nọrọ jụụ na sofa ma ọ bụ akwa.
B.J.: Ọ na-aga site n'oge. Akwụkwọ ọgụgụ ojinke ndi mmadu, nke ihe omimiBụ ihe m na-agụkarị. Ma m gụkwara ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme n'oge ahụ mụ onwe m na-anwa idebe akwụkwọ ndị ntorobịa pụtara ìhè, iji mee ka m mata ihe ndị na-eto eto na-agụ na ihe ụmụ klas m na-eme.
BJ: Anọ m na a agụ kwụsị ugbu a. Enwere m ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dị ka N’etiti abalịnke Mikel Santiago, Ọnụ ụzọ, nke Manel Loureiro ma obu Egwuregwu nke mkpụrụ obi nke Javier Castillo dere. Anaghị m ede ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na echeghị m na ọ ga-ewe m oge ịnọdụ n'ihu kọmputa ahụ ma chọọ akụkọ ọhụrụ.
BJ: Ndị nkwusa na-agbake site na nsogbu coronavirus na echere m na ha atabeghị ahụhụ dịka atụ anya ya, ọ bụ ezie na o doro anya na mpaghara niile enweela oge siri ike. Ọ bụ ụwa mgbagwoju anya na nke dị egwu, yabụ ịrara oge dị ukwuu nye nke a, ị ga-enye ya ụbọchị 365 niile n'afọ. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe m na-eme. Tupu emezu ya, agbalịrị m biputere na Enwetaghị m ya na nke mbụN'ezie, ndị nkwusa niile jụrụ m. Ma Adaghị m mbà, Ahụrụ m na netwọkụ mmekọrịta na ịntanetị nwere ike ịbụ nnukwu ngwa ọrụ na ngosi ngosi dị mma iji ruo ndị na-agụ akwụkwọ na ekele maka obodo m wuru na netwọkụ m nwere ike ibipụta Abụ maka Paula. O ruola afọ iri na abụọ kemgbe nke a, akwụkwọ iri na anọ n'ahịa, ọ bụ ezie M ka nwere ọtụtụ ihe m ga-amụta.
BJ: O siri ike. Echeghị m na ọrịa ahụ, nje na ihe na-eme nwere ihe ọ bụla dị mma. O doro anya na, n'oge na-adịghị anya, ihe a niile ga-apụta n'usoro, akwụkwọ na ihe nkiri. Ka anyị nwee olile anya na anyị agaghị akwụsị ịkọ ndị mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Blue Jeans. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ogige ahụ